Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: စိုးရိမ်မှုများပျောက်စေလို
by Moesel Nay on Wednesday, 20 June 2012 at 01:37 ·
၁၆-၆-၂၀၁၂နေ့တွင် တပ်ရင်း ၅၃၇မှ တပ်ရဲဗိုလ်ကြီးဆိုသူ ထွန်းဇေယျာကျော်သည် ဘင်္ဂလီများနေထိုင်ရာ အနောက်ပြင်ကျေးရွာ အနီးရှိ ရခိုင်သူ၊သားများ၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို ကူတောင်ရဲစခန်းမှ တောင်းယူကာ ၄င်းဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်ပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအား ဘင်္ဂလီလူမျိုးများကို တစ်စုံတစ်ရာ မပြုလုပ်ရန်နှင့် ပြုလုပ်ပါက မိမိကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက်ထိန်းသိမ်းပါက မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကို ခြိ်မ်းခြောက်ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။
ဖျက်ဆီးသူများအား လိုက်လံနှိမ်နှင်းရာမှ ဘင်္ဂလီများ ကြိုတင်ထောင်ချောက်ဆင်ထားသော ရွာအ၀င်(ပိုက်သည်ရွာ)အရောက်တွင် သစ်ပင်ပေါ်မှ နေ၍ ပိုက်ကွန်များဖြင့် ဖမ်းချုပ်ပြီး ရိုက်သတ်ခဲ့ကြောင်း ရသေ့တောင် မြို့ခံတစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုအခြင်းအရာများကို ကြည့်ရှု၍ ဘင်္ဂလီများသည် ကြိုတင်အကွက်ကျ စီစဉ်ပြီး လုပ်ဆောင်နေကြနေသည့်အတွက် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏ အသက်အန္တရာယ်များမှာ စိုးရိမ်နေရကြောင်း
၁၉-၆-၂၀၁၂ နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဘင်္ဂလီများက ကူတောင်ကျေးရွာအား ၀င်ရောက်မီးရှို့သည့်အတွက် ဖျက်ဆီးသူများအား လိုက်လံနှိမ်နှင်းရာမှ ဘင်္ဂလီများ ကြိုတင်ထောင်ချောက်ဆင်ထားသော ရွာအ၀င်(ပိုက်သည်ရွာ)အရောက်တွင် သစ်ပင်ပေါ်မှ နေ၍ ပိုက်ကွန်များဖြင့် ဖမ်းချုပ်ပြီး ရိုက်သတ်ခဲ့ကြောင်း ရသေ့တောင် မြို့ခံတစ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုအခြင်းအရာများကို ကြည့်ရှု၍ ဘင်္ဂလီများသည် ကြိုတင်အကွက်ကျ စီစဉ်ပြီး လုပ်ဆောင်နေကြနေသည့်အတွက် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ၏ အသက်အန္တရာယ်များမှာ စိုးရိမ်နေရကြောင်း ရသေ့တောင်မြို့ခံမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 00:35
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: စိုးရိမ်မှုများပျောက်စေလို . All Rights Reserved